अल्कोहलले एक मिनेटमै मा’र्न सक्छ कोरोना भाइरसलाई – Khabarhouse
अल्कोहलले एक मिनेटमै मा’र्न सक्छ कोरोना भाइरसलाई
Khabar house | १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १५:०१ | Comments
काठमाडौं (एजेन्सी) । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आ’तंकित बनाइरहेको छ। चीनमा मात्र कम्तिमा १३ सय मानिसको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृ’त्यु भइसकेको छ भने ४५ हजार भन्दा धेरै सं’क्रमित भएका छन्। यसरी विश्वभर यो र’हस्यमयी भाइरसले मानवमाथि ग’म्भीर सं’कट उत्पन्न हुँदा वैज्ञानिकहरु यो भाइरस नियन्त्रणबारे खोज अध्ययनमा लागेका छन्।
यही बीचमा जर्मनीका दुईवटा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान कर्ताहरुले कोरोना भाइरसको आ’युबारे एक तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले कोरोना भाइरस ३०डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको तापक्रममा क’मजोर हुने तथ्य पत्ता लगाएका हुन्। उनीहरुले तापक्रम बढे सँगै यो भाइरस क’मजोर हुने दा’वी गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्।
अनुसन्धानकर्ताहरुले अ’ल्कोहलले यो भाइरसलाई एक मिनेटमै मा’र्नेसमेत बताएका छन्। साथै डि’सइन्फेक्टेट गरे यो भाइरस ३० सेकेण्डमै म’र्ने जनाइएको छ । यो तथ्यले कोरोना भाइरसविरुद्धको ल’डाईँमा स’फलता पाउन सकिने विश्वास अनुसन्धान कर्ताहरुको छ।
ड’न्डिफोर कहिल्यै निको भएन ? अब गर्नुस् यी ४ सरल उपाय
जाडोमा बदाम खानु स्वास्थ्यका लागि हितकर, यस्ता छन् फाइदा
रायोको सागका १० चमात्कारी फाइदा
जाडोमा यसरी बनाउनुस् घरेलु उपायबाट छि’न भरमै हात नरम र गोरो !
धेरै नखानुहोस् यी ९ प्रकारका खाना, चाँडै खुइलेला तालु